लेनदेन रकम 20..8 बिलियन अमेरिकी अमेरिकी डलर हो! CVC ले बजार बन्द टोटिबा खरीद गर्न प्रस्ताव गर्दछ - YIC International International Co |तपाईंको इन्टरजेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आपूर्तिकर्ता |www।YIC-Electronics.com
घर > समाचार > लेनदेन रकम 20..8 बिलियन अमेरिकी अमेरिकी डलर हो! CVC ले बजार बन्द टोटिबा खरीद गर्न प्रस्ताव गर्दछ
लेनदेन रकम 20..8 बिलियन अमेरिकी अमेरिकी डलर हो! CVC ले बजार बन्द टोटिबा खरीद गर्न प्रस्ताव गर्दछ
CVC का पूंजी साझेदार, एक विश्वव्यापी निजी इनिटी ​​फर्म, T 20 अर्ब डलर $ 20 भन्दा बढीको लागि तोशिबा किन्न प्रस्ताव गर्दै छ र यसलाई प्राप्त गर्दछ।
निकिकी एशियाई समीक्षाले रिपोर्ट गरे कि तोशिबा सीईओ र अध्यक्ष गोरबुकी कुमानतानले भने, आज पछि कम्पनीले आज पछि CVC बैठकको बारेमा छलफल गर्नेछ।
यो रिपोर्ट गरिएको छ कि CVC द्वारा छलफल गरिएको बोलपत्र तोशिबाको हालको स्टक मूल्यमा% 0% प्रीमियम हो। मंगलबारको बन्द हुने मूल्यमा आधारित, लेनदेनको मान 2.3 ट्रिलियन येन ($ 20..8 अर्ब) नजिक हुनेछ। यसका साथै, सीवीसीले अधिग्रहणमा भाग लिन अन्य लगानीकर्तालाई पनि भर्ती गर्ने विचार गरिरहेका छन।
तातिबाले बुधबारको बयानमा भनिएको थियो कि कम्पनीले मंगलबार एक प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त गर्यो र थप स्पष्टीकरण र गम्भीर विचारको लागि CVC अनुरोध गर्दछ। "
पछिल्ला केही वर्षहरुमा तोशिबाले स्कांडलहरूबाट ग्रस्त छ र ठूलो क्षति भोग्नु परेको छ, र अधिकार संरक्षण लगानीकर्तालाई सुधार प्रवद्र्धित छ। यदि यसले डेलिस्टल गर्ने निर्णय गर्दछ भने तोशिबा जापानको कर्पोरेट क्षेत्रको केही उदाहरणहरू मध्ये एक बन्नेछ सेयरधारक छानबिनबाट बच्नको लागि सार्वजनिक बजारबाट केही उदाहरणहरू मध्ये एकमा।
प्रतिवेदनको अनुसार सीवीसीले तोशिबाको व्यवस्थापन टीमको प्रासंगिकर्तामा छलफल गर्नेछ, प्रस्तावले निर्णय लिनु अघि यसको शेयरधारकहरूले फाइदा पुर्याउँछ कि हुँदैन भन्ने विचार गर्नेछ। कुमानतान 53 53 बर्षमा बाहिरबाट पहिलो सीईओ भाडामा लिइएको हो। उनले सुमितमोको गुत्तीय समूह र सीवीसी जापानका अध्यक्षको उपराष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरेका छन्।
यदि यसले नियामक स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्दछ, CVC ले लिंगओभर प्रस्ताव सुरू गर्न। गत वर्ष लागू कानूनका अनुसार वित्त मन्त्रालयले लेनदेन समीक्षा गर्न आवश्यक छ। संवेदनशील क्षेत्रहरू जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा कम्पनीहरूमा वैदेशिक लगानीमा कानूनले कडा छानबिनलाई कमजोर पार्दछ। यदि लेनदेन सफल छ भने, जापानी कर्पोरेट राक्षस जनताको अगाडि अनुभव भएको छ।